पानी ग्यास परिभाषा र प्रयोग गर्दछ
जल ग्यास परिभाषा
पानी प्रयोग गर्न हाइड्रोजन उत्पादन गर्न
जल ग्याँस भनेको दहन ईंन्धन हो जसले कार्बन मोनोअक्साइड (CO) र हाइड्रोजन ग्याँस (एच2) समावेश गर्दछ। पानीको ग्याँस गर्म हाइड्रोकार्बनमाथि भाप पारेर बनाइन्छ। भाप र हाइड्रोकार्बन बीचको प्रतिक्रियाले संश्लेषण ग्यास उत्पादन गर्दछ। पानी-ग्याँस पनी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कार्बन डाइअक्साइड को स्तर कम गर्न र हाइड्रोजन सामाग्री को समृद्ध गर्न को लागी उपयोग गर्न सकिन्छ, पानी को ग्याँस बनाइयो। पानी-ग्यास पनीर प्रतिक्रिया हो:
CO + एच2हे → सीओ2+ एच 2
पानी-ग्याँस पारी प्रतिक्रिया पहिले 1780 मा इटालियन फिजिकिस्ट फेलिस फन्टानाले वर्णन गरेको थियो।
1828 मा, इंग्ल्याण्डमा पानीको ग्याँस उत्पादन गरी भ्याण्ड-फ्रिक कोकमा भाप गरीरहेको थियो। 1873 मा थैडडेस एससी लोभले यो प्रक्रियालाई पेट पारेका थिए जसले हाइड्रोजनको साथमा ग्यासलाई पानीको ग्यास पनी प्रतिक्रियाको प्रयोग गर्यो। लोईको प्रक्रियामा, दबावित भापलाई हट कोइला मा चट्याइएको थियो, गर्मीले चिमनी प्रयोग गरी राखिएको। नतिजा ग्यास ठुलो भएको थियो र प्रयोग गर्नु अघि छानिएको छ। लोईको प्रक्रियाले ग्याँस निर्माण उद्योगको वृद्धि र अन्य ग्यासहरूको लागि समान प्रक्रियाहरूको विकास बढाउँछ, जस्तै हबेर-बोस प्रक्रिया अमोनियालाई संश्लेषण गर्न। जस्तै अमोनिया उपलब्ध भयो, प्रशोधन उद्योग बढ्यो। हाइड्रोजन ग्याँसमा भागेका बर्फ मिसिनहरू र यन्त्रहरूका लागि लोटे आयोजना गरिएको पेटेंट।
पानी ग्याँस उत्पादनको सिद्धान्त सीधा छ। भाप रेड-ह्याट वा सेतो-हाई कार्बन-आधारित ईन्धनमा उत्रिएको छ, निम्न प्रतिक्रिया उत्पादन गर्दै:
H2O + C → H2+ CO (ΔH = +131 केजी / mol)
यो प्रतिक्रिया endothermic छ (गर्मी को अवशोषित), यसैले कोष को लागि गर्म हुनु पर्छ।
यो काम दुई तरिका छन्। एक भ्याम वा हावाको बीचमा केहि कार्बन (एक बहिर्गम प्रक्रिया) को दहन उत्पन्न गर्न को लागी हो:
O2+ C → CO2(ΔH = -393.5 केजे / mol)
अर्को विधि हो कि ओक्सीजन ग्याँस को वाहेक हावा को उपयोग गर्नुहोस, जो कार्बन डाइअक्साइड को बजाय कार्बन मोनोअक्साइड को उत्पादन गर्दछ:
O2+2C →2CO (ΔH = -221 केजे / mol)
जल ग्यासको विभिन्न रूप
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका पानीको ग्याँसहरू छन्। नतीजा ग्यासको संरचना यसलाई बनाउनका लागि प्रयोग हुने प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ:
जल ग्याँस पारी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ग्याँस - यो पानी-ग्याँस पनी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रयोग गरी पानीको ग्यास दिइएको छ जुन शुद्ध हाइड्रोजन (वा कम्तीमा कम समृद्धि हाइड्रोजन) प्राप्त गर्दछ। शुरुआती प्रतिक्रियाबाट कार्बन मोनोअक्साइड पानी कार्बन डाइअक्साइड लाई हटाउन को लागी प्रतिक्रिया दिईएको छ, केवल हाइड्रोजन गैस छोडेर।
अर्ध-पानी ग्याँस - अर्ध-पानी ग्याँस पानीको ग्याँस र उत्पादक ग्याँसको मिश्रण हो। प्राकृतिक ग्याँसको विरोधको रूपमा निर्माता ग्याँस कोइला वा कोकबाट व्युत्पन्न ईन्धन ग्याँसको नाम हो। अर्ध-पानी ग्याँस उत्पादन गरी ग्यास संकलन गरी बनाइन्छ जब भ्यामलाई पानीको फोक्स प्रतिक्रियालाई निरन्तरता दिनको लागि पर्याप्त मात्रामा तापमान बनाए राख्न कोकलाई जलाएर हावा गरिन्छ।
कार्बोर्टेड पानीको ग्यास - पानीको ग्यासको ऊर्जा मूल्य बढाउन कार्बोरेटेड पानीको ग्यास उत्पादन गरिन्छ जुन सामान्यतया कोइला ग्याँस भन्दा कम छ। पानीको ग्याँसले गरम तापनि को माध्यम ले पारित गरेर कार्बोचर गरिएको छ जुन तेल संग स्प्रे गरिएको छ।
पानीको ग्यास प्रयोग गर्दछ
केहि औद्योगिक प्रक्रियाहरु को संश्लेषण मा जल ग्याँस को उपयोग गरे:
ईंन्धन कक्षबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाउन।
ईन्धनको ग्याँस बनाउनका लागि उत्पादक ग्याँसको साथ प्रतिक्रिया
फिशर-ट्रोप्सच प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको।
अमोनियालाई सिंकाइज गर्न शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त गर्न प्रयोग गरियो।
कमजोर एसिड परिभाषा र उदाहरण (रसायनशास्त्र)
इलेक्ट्रोन क्लाउड परिभाषा
रसायन विज्ञान मा सामान्य एकाग्रता परिभाषा
मोनोमर परिभाषा र उदाहरण (रसायन विज्ञान)
प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया परिभाषा
आईनिक रेडियो र परिभाषा
प्रगतिशील छोरा स्टोरी - लूका 15: 11-32
स्पाइडर-मैन चलचित्रहरूको लागि हास्य पुस्तक प्रेरणाहरू
कहाँ जानुहोस् सडक
Aquariums र Animal Rights - के एक्वैरियम संग गलत छ?
सबै समयको शीर्ष 40 स्नातक गीतहरू
बच्चाहरूको लागि राम्रो ब्यालेट के हो?
गॉर्डन कुरमन द्वारा स्कूलित
एलिस लियोड कलेज प्रवेश
निसान एसयूवी र क्रसवर वाहन अवलोकन
10 बेस्ट ब्लुज क्रिसमस एलबम
IEP - व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम
जीवविज्ञान उपसर्ग र असफलताहरू: -पंक्ति विज्ञान, -प्रणाली
13 'बोल्ड र सुन्दर' स्टार कार्ला मोस्ली को बारे मा सबै तथ्य
स्टेट्ससन विश्वविद्यालय जीपीए, एसएट र एक्ट डाटा
स्विंगिंग स्कर्ट एलपीजीए ताइवान च्याम्पियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट
1961-हिल्सः विदेशीहरूले अपहरण गरे
किन Mandarin चीनी सिक्नु हुन्छ?
संस्थापक आमाहरू: अमेरिकी स्वतन्त्रतामा महिलाहरूको भूमिका
सीरियल किलर एर्डर्ड ज्याइनको प्रोफाइल